RASMI: Klopp oo shaaciyey maqnaanshaha mid ka mid ah xiddigihiisa ugu muhiimsan inta ka dhiman xilli ciyaareedka – Gool FM
(England) 10 Luulyo 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa si rasmi ah u shaaciyay in kabtanka Reds ee Jordan Henderson uusan ciyaari doonin kulamada ka harsan xilli ciyaareedka, sababa la xiriira dhaawac soo gaaray.
Jordan Henderson ayaa soo gaaray dhaawac inta uu socday kulankii ugu dambeeyay ay Liverpool Arbacadii la ciyaartay kooxda Brighton, kaasoo ay Reds ku adkaatay 3-1.
Haddaba tababare Jürgen Klopp ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka ay Liverpool la ciyaari doonto kooxda Burnley, in Jordan Henderson uusan awoodi doonin inuu ciyaaro kulamada Liverpool kaga harsan xilli ciyaareedka.
Macalinka reer Germany ayaa yiri:
“Jordan Henderson waxaa soo gaaray dhaawac dhanka jilibka ah, laakiin waxaa la xaqiijiyay inuusan u baahnayn qalliin”.
“Jordan Henderson ma awoodi doono inuu ciyaaro afarta kulan ugu dambeysa, laakiin wuxuu nala joogi doonaa bilowga xilli ciyaareedka soo socda”.